မတျောလိုကျရတဲ့ယောက်ခမ – My Blog
မောငျတုတျအသကျ(၂၀)ကြျောအရှယျတုနျးကပေါ့။ကြောငျးကကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ရညျးစားဖွဈတယျ။ဒါလဲသိပျအဆနျးကွီးတော့မဟုတျလှပါဘူး။လူငယျသဘာဝခဈြကွ၊ကွိုကျကွ၊ဟျောတယျချေါဆှဲလိုကျကွဆိုတော့မထူးတော့မထူးဆနျးပါဘူး။အဲ့ဒီကောငျမလေးနဲ့ကွိုကျပွီး(၃)လလောကျနတေော့သူမအိမျကိုမောငျတုတျဝငျခှငျ့ ထှကျခှငျ့လကျမှတျရသှားတယျပေါ့ဗြာ။အဲ့ဒီကောငျမလေးနာမညျထကျထကျလို့ပဲမှတျလိုကျပါတော့။ထကျထကျတို့အိမျကိုဝငျထှကျခှငျ့ရပွီဆိုတာနဲ့မောငျတုတျတဈယောကျခြောငျးပေါကျမတကျသှားတော့တာပေါ့။မနကျပိုငျးဆို ကြောငျးသှားဖို့ဝငျချေါတယျ။ညနဆေိုပွနျပို့တယျ။ကြောငျးပိတျရကျတှဆေိုကြူရှငျအကွောငျးပွပွီးဟျောတယျဒိုး တယျပေါ့။မောငျတုတျမိဘတှကေလဲ သူတို့သားလေးသှားလာရေးအဆငျပွအေောငျဆိုပွီးတော့ကားအစုတျတဈ စီးဝယျပေးထားတော့ မွငျးကိုအတောငျပံတပျထားသလိုစိတျသှားတိုငျးကိုယျမွနျမွနျဆနျဆနျသှားဖွဈတယျပေါ့။ ဇာတျလမျးကိုပွနျဆကျပေးပါ့မယျ။
ထကျထကျအိမျကိုဝငျထှကျခှငျ့ရတာနဲ့မနကျတိုငျးကြောငျးသှားဖို့ကွိုပေးရတာ ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ထကျထကျတဈယောကျအိပျယာထနောကျကနြတေဲ့နဆေို့ရငျမောငျတုတျတဈယောကျ အိမျထဲမှာထိုငျစောငျ့ပရေော့ပဲ။ယောက်ခမကွီးကတော့စကားကိုတဈခှနျးစနှဈခှနျးစလာပွော၊ပွီးတော့ကျောဖီဖြျော ပေး၊ပွီးသူမလဲရမေိုးခြိုးဖို့ပွငျရတာပဲဗြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မောငျတုတျယောက်ခမကွီးဟာ နာမညျကွီးမွို့လယျက ဟျောတယျတဈခုမှာရာထူးအကွီးကွီးမနျနဂြောမကွီးတဈယောကျဖွဈနလေို့ပေါ့ဗြာ။ထကျထကျတို့ကအဖဆေုံးသှားပွီဆိုတော့ အမတေဈခု သမီးတဈခုပေါ့။(အငျးလေ..တဈခုစီပဲပါမှာပေါ့။အပိုတော့ဘယျပါမလဲဗြ…နော့)။ ပွနျဆကျမယျဗြာ….း) ထကျထကျတဈခါတဈလေ အရမျးကွာနတေဲ့နမြေို့းဆိုရငျတော့သူ့အမကေပဲအရငျအလုပျ ကိုထှကျသှားတာဗြ။ကနြျောနဲ့ထကျထကျနဲ့နှဈယောကျထဲကနျြခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနမြေို့းဆိုရငျတော့ မောငျတုတျတဈ ယောကျကြောငျးမှနျမှနျတကျစာမခကျ ခကျခငျြလဲခကျဒို့မတကျဆိုပွီးတော့ကြောငျးမတကျတော့ဘူးပေါ့ဗြာ။ယောက်ခမအ လုပျကိုထှကျသှားပွီဆိုတာနဲ့ အိမျတံခါးတှပေိတျလိုကျနျော..သားဆိုတဲ့အသံကွားတာနဲ့ စဈတပျကစဈသားတှေ အျောသလိုမြိုး ဟုတျ ….ဆိုတဲ့ဝမျးခေါငျးသံကွီးနဲ့အျောပွီးတော့ တံခါးပိတျပွီးထကျထကျဆီကိုပွေးတော့တာပေါ့။ တဈရကျတော့ဒီလိုမြိုးနတေ့ဈနမှေ့ာလူမိသှားခဲ့တယျ။ယောက်ခမကွီးကဟမျးဖုနျးကနျြခဲ့လို့လာယူတာနဲ့ကွုံရော။ သူ့ဆီမှာလဲသော့တဈစုံရှိတယျလေ။တိုကျဆိုငျခငျြတော့ မောငျတုတျကလဲကားကိုအဝေးကွီးမှာရပျခဲ့ရတဲ့နပေ့ေါ့။ တဈယောကျယောကျမြားသိသှားခဲ့ရငျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ဖိနပျလေးကိုလဲခါးကွားထိုးပွီးခဈြသူအခနျးထဲမှာသိမျးထား ရတာကတော့ ထကျထကျရဲ့စညျးကမျးတဈခုကိုလိုကျနာတယျပဲဆိုရမှာပေါ့။ယောက်ခမကွီးက ကြှနျတျောတို့သှား ပွီဆိုပွီးသူ့သော့နဲ့သူဖှငျပွီးဝငျတဲ့အခြိနျပေါ့။ဒီနရောမှာထကျထကျတို့ အိမျရဲ့လိုကေးရှငျးနဲ့ဖှဲ့စညျးပုံကိုပွောပါရစေ ထကျထကျတို့က တဈထပျတိုကျပုလေးဗြ။အိပျခနျး(၃)ခနျးရှိတယျ။၂ခနျးကကပျလြှကျပေါ့။ပွီးတော့တဈခနျးက မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ။ယောက်ခမကွီးတို့လငျမယား(သူ့ယောကငြ်္ားရှိစဉျအခါက)နတေဲ့အခနျးမှာထကျထကျအမေ နတေယျ။ဘေးကပျရကျအခနျးမှာကထကျထကျအခနျး၊မကျြနှာခငျြးဆိုငျအခနျးကတော့ပိတျထားတယျပေါ့။ပွီးမှ နောကျဖေးမှာမီးဖိုနဲ့ရခြေိုးခနျးအိမျသာတှဲလြှကျ။အဲ..ဘယျရောကျသှားပွနျလဲမသိဘူး..ပွနျဆကျမယျ။ယောက်ခမ ကွီးကဖုနျးကနျြခဲ့လို့ပွနျဝငျလာတဲ့အခြိနျ ကြှနျတျောတို့ကလဲဖွဈခငျြတော့ရခြေိုးခနျးထဲကရခြေိုးပွီးပွနျလာတဲ့ ထကျထကျကိုထမိနျရလြေားနဲ့မွငျတော့ စိတျမထိမျးနိုငျပဲ ဆှဲပွီးကြုံးတဲ့အခြိနျ။အခနျးတံခါးကိုဟခဲ့မိတယျဗြာ။
အိမျရှတေံ့ခါးမကွီးကိုလုံခွုံအောငျပိတျခဲ့တော့ မောငျတုတျတဈယောကျခပျပေါ့ပေါ့ပဲထားလိုကျတာပေါ့လေ။ ခဈြသူလေးထကျထကျက ရလြေားလေးနဲ့လှုပျလီလှုပျလဲ့လမျးလြှောကျလာပွီးလြှာလေးထုတျပွလိုကျတော့ စိတျတှသေောငျးကနျြးလှနျးလို့အဝတျအစားတှအေကုနျခြှတျပွီး ထကျထကျအခနျးထဲမှာကောကျပွီးကော့နေ တဲ့ဖငျလေးကိုကုတငျစောငျးမှာတငျပွီး လေးဘကျကုနျးခိုငျးပွီး ဖငျသားဖှေးဖှေးကောကျကောကျလေးတှကေို လကျနဲ့အားရပါးရညှဈပွီးဆောငျ့ပေးနတေဲ့အခြိနျပေါ့။ထကျထကျကလဲထနျတဲ့မိနျးကလေးအမြီုးအစားထဲမှာပါ တယျလေ။နဲနဲဆှတာနဲ့အရညျတှကေမြားမြားထှကျ၊လီးဝငျတာနဲ့စိတျကိုလှတျပွီးအျောတကျတော့မောငျတုတျ အကွိုကျတှပေ့ေါ့။ဒီလိုမြိုးခဈြသူလေးကို လေးဘကျထောကျခိုငျးပွီးဆောငျ့နတေဲ့အခြိနျမှာပဲ…တဈဘကျခနျးက တံခါးဖှငျ့သံလဲကွားရောနှဈယောကျသားဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈရော။မောငျတုတျရောထကျထကျရောဖငျတုံးလုံး လေးတှနေဲ့တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျကွညျ့ပွီးပွီုငျတူကွညျ့မိတာက အခနျးတံခါးကို။အခနျးတံခါးကလဲ ဟစိလေးဖွဈနေ။မောငျတုတျဆိုပိုဆိုးသေး ဂှေးတနျးလနျးနဲ့ဘာလုပျလို့ဘာကိုငျရမှနျးကိုမသိတာ…။ထကျထကျ ကတော့ ကမနျးကတနျးထမိနျကိုကောကျပွီးရလြေားပွီး ဟနျမပကျြနဆေိုတဲ့အမူအယာနဲ့အကြီ င်္တှဝေတျခိုငျပွီး ဖောရှောသှားလုပျလိုကျမယျဆိုပွီးထှကျသှားတယျ။မောငျတုတျလဲတုနျတုနျရီရီနဲ့ အကြီ င်္နဲ့ပုဆိုးကိုကောကျဝတျ ပွီးထကျထကျတို့ဘာမြားပွောနလေိမျ့မလဲဆိုပွီးအခနျးတံခါးအကှယျလေးမှာနားပါးပါးနဲ့ကပျပွီးနားထောငျနမေိ တယျ။သူတို့သားအမိနှဈယောကျပွောတာကွားတော့ ခုနကကွောကျစိတျနဲ့တောငျတာလြော့သှားတဲ့လီးတောငျ ပွနျတောငျလာမိပါတော့တယျ။
သူတို့ဘာတှပွေောနကွေသလဲဆိုတော့…. မိထကျ…ငါကညညျးကိုကြောငျးသှားပွီတောငျထငျနတော..နငျကဟျောတယျခသကျသာအောငျလုပျနတော လား… အာ…အမကေလဲမဟုတျပါဘူး..မတျောတဆဖွဈသှားတာပါ။ပွီးတာနဲ့ကြောငျးသှားမှာပါ။ ဘယျနှခြီပွီှးမှကြောငျးသှားမှာတုနျး…ဟိုတဈခေါကျ တုနျးကလို သမီးဟာပွဲသှားလားမသိဘူးဆိုရငျငါRoll onဘူး နဲ့ထပျထိုးပေးလိုကျအုနျးမှာ..ကောငျမလေးနျော..အမထေကျသမီးတဈလကွီးခငျြ နေ..ဟုတျလား.. ဟိ..အမနေျော..အမေ့Roll onဗူးဆိုရငျတော့ ကှိုငျလေးဘာလေးစှပျပွီးမှထိုး…ဟိဟိ.. ဒီကောငျမလေး..အမကေို….ကဲ..ငါ..သှား မယျ..ကြောငျးမသှားဘူးဆိုရငျလဲမောငျတုတျကိုတဈခုခုစီစဉျပွီးကြှေး လိုကျ…ငါအလုပျနောကျကနြတေော့မယျ.. Yes… သှကျလကျတကျကွှစှာပဲထကျ ထကျ ကသူ့အမကေိုနှုတျဆကျပွီးတော့ အားဝါးပေးလိုကျပါသေးတယျ။အဲ့တော့ သူမအမကေ.. ဟှနျး.ရှံစရာ..ရခေဲခြောငျးစားထားတာကွီးနဲ့ လို့နောကျသှား ပါသေးတယျ။ဒီစကားတှကွေားပွီးမောငျတုတျတဈ ယောကျသှေးဆူမိတာအမှနျ။ဖွဈနိုငျရငျ ရုံးတကျဖို့သှားတဲ့ယောက်ခမကွီးကိုလိငျစိတျနဲ့ပထမဆုံးကွညျ့ လိုကျမိတာ သူမဝတျထားတဲ့ အဖွူရောငျရှပျအကျြီနဲ့ဒူးဖုံးစကဒျအနကျရောငျလေးနဲ့ပငျတီအရာကွီးကထငျးလို့။ခကျြခငျြးပဲ မကောငျးပါဘူးလဆေိုပွီး အတှေးထဲကဖြောကျနတေုနျးထကျထကျတဈယောကျအခနျးထဲကိုပွနျဝငျလာပွီးထမိနျ ရလြေားလေးကိုခြှတျပွီးအလိုကျတသိဘာမှပွောစရာမလိုပဲကုတငျ စောငျးမှာလေးဘကျလေးပွနျထောကျပွီး…
လာကှာ..ကို…ထကျမပွီးသေးဘူး..လာလုပျ….ဆိုပွီးခြှဲပွဈပွဈအမူအယာလေးနဲ့ပွောတော့ (ပရိတျသတျကွီးရေ..မောငျတုတျဘာလုပျတယျထငျလဲ ဟငျ…………….(စတာပါဗြာ)) မောငျတုတျနဲ့ထကျထကျတို့တဈခြီပွီးသှားပါတယျ။ကုတငျစောငျးမှာလေးဘကျကုနျးထားတဲ့ထကျထကျ ကိုမောငျတုတျ ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီးလိုးတာ ဖငျကိုသာမကိုငျပေးထားဘူးဆိုရငျထကျထကျတဈယောကျအရှကေို့ ဟပျထိုးလဲပါတယျ။ဘာဖွဈလို့ကွမျးတာလဲလို့ တဈခြီပွီး သှားတဲ့အခါမှာထကျထကျကမေးတော့ ထကျအမနေဲ့ ထကျကိုပွိုငျတူလိုးခငျြးစိတျပွငျးထနျနလေို့ပါလို့ပွောလိုကျရငျ ဓါးနဲ့ထိုးမှာဆိုးလို့ ထကျကအရမျးလှ လို့ပါလို့ပွော လိုကျပါတယျ။ထကျထကျလဲပွုံးသှားပွီး.. နှုံးသှားတယျ..ကိုရယျ..ထကျခဏအိပျအုနျးမယျ..ကိုလဲ..တူတူလာအိပျနျော.. အငျ..ကို..အပေါ့သှား လိုကျအုနျးမယျ… ကြှနျတျောလဲ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ပဲ ရှုးရှုးပေါကျပွီး လိငျတံကိုသနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့ထှကျလာမိပါတယျ။တဈခါမှသတိမ ထားမိတဲ့ကိစ်စတဈခုကို ကြှနျတျောအပူတပွငျးရှာဖှနေမေိပါတယျ။ထကျထကျတို့အိမျရောကျခဲ့ပွီးတဲ့အခြိနျကာလ အတှငျးမှာပထမဆုံးဆိုတာတော့ဝနျခံပါရစေ။
ကြှနျတျောရှာနမေိ တာ ထကျထကျတို့အိမျနောကျဖေးမှာလှမျးထား တဲ့ ထကျထကျအမဝေတျတဲ့အတှငျးခံတှကေိုပါ။ဘာရယျလို့တေ့ာမဟုတျပါဘူး။ကွညျ့ခငျြစိတျတှပွေငျးထနျ နပေါ တယျ။တှပေ့ါပွီ..။ကွိုးတနျးမှာလှမျးထားတဲ့ အနီရောငျပငျတီတဈထညျရယျ၊ ပနျးဆီရောငျတဈထညျရယျ။ဘယျ သူ့ဟာ ဘာရောငျဆိုတာကနြျောခှဲခွား တကျပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ခဈြသူထကျထကျရဲ့ဆိုဒျကို ကနြျောသိနပွေီးသားဖွဈနလေို့ပါ။ကြှနျတျော မောငျတုတျရဲ့လကျတှဟော မစခေိုငျး ရပါပဲ အနီရောငျအတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေးကိုလှမျးယူလိုကျပါတယျ။ဇာနားကှပျလေးတှနေဲ့ အနီရောငျပငျတီလေးရဲ့ဘယျနရောဟာဘာကို ဖုံးအုပျနလေိမျ့မ လဲလို့ရငျဖိုစှာကွညျ့ရငျးနဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့လီးနဲ့ ပငျတီလေးရဲ့အဓိကနရောတို့ထိတှပေ့ေးလိုကျတာနဲ့ လိငျတံကွီးကပွနျမာလာပါတယျ။ဒီအခြိနျမှာထကျထကျကို လိုးပွီးထှကျထားတဲ့လိငျရညျတှရေယျ၊ထကျထကျဆီ ကထှကျထားတဲ့အရညျတှရေယျလီးမှာပနေတေုနျးပါ။ဒါတှကေိုအဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကမစဉျးစားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတိုငျးပဲ လီးကိုပငျတီနဲ့အုပျပွီဆုတျကိုငျလို့ကောငျးကောငျးဆုတျကိုငျနခေဲ့ပါတယျ။အနညျးငယျကွာလာမှ သတိပွနျဝငျပွီး ရှူးပေါကျ၊ရဆေေးပွီးတာနဲ့ ပငျတီလေးကိုသူ့နရောသူပွနျလှမျးခဲ့ပွီးထကျထကျဘေးမှာဝငျအိပျလိုကျပါတယျ။ ထကျထကျနိုးလာတော့ ခုနက အမဘောတှပွေောသှားလဲဆိုပွီးမသိခငျြ ယောငျဆောငျပွီးကွောကျနသေလိုစိုးရှံ့ နသေလိုလိုဟနျလုပျပွီးမေးလိုကျပါတယျ(သူငယျခငျြးတို့ရေ..မောငျတုတျကအဲ့လိုမြိုးလဲသောကျခှကျပွောငျ တိုကျ တကျပါတယျ။)
ဘာမှမဖွဈဘူးကို…အမနေဲ့ထကျနဲ့ကအရမျးပှငျ့လငျးတာ…။အမကေဘာမှမပွောဘူး..မစိုးရိမျနဲ့..ဟိုတဈ ခေါကျတုနျးက ကို လုပျတုနျးကထကျထကျ အဖုတျ လေးပှနျးသှားလို့နာတာတောငျမှအမကေို့ပွောပွလိုကျ တယျ။အမနေဲ့ကအဲ့ဒီလောကျပှငျ့လငျးတာ..ဘယျလောကျပှငျ့လငျးလဲဆိုရငျ..အမျစီကားတှလေောကျ ကို အတူတူထိုငျကွညျ့ကွတယျ။။အရမျးကွမျးတဲ့ကားတှကေိုသာ တဈယောကျစီခှဲကွညျ့ကွတာ။ဒါတှကေိုတဈ ယောကျနဲ့တဈယောကျသိနပေမေဲ့မပွော ဘူး….မမေဆေီမှာ ဖဖေထေားခဲ့တဲ့အခှတှေအေမြားကွီး။ဖဖေကေ သင်ျဘောသားဆိုတော့ အခှတှေဝေယျလာတာ..ထကျလဲကွညျ့ခငျြယူကွညျ့လိုကျတာ ပဲ..မမေကေသိတယျ ။ဘာမှမပွောဘူး…။အဲ့ဒါ ၁၀တနျးအောငျကတညျးကလေ။ အျော..ဒါဆိုထကျမမေကေထကျကိုအရမျးအလိုလိုကျတယျပေါ့။
အဲ့လို လဲမဟုတျဘူး..အသကျအရှယျနဲ့ခတျေအခွအေနကေိုနားလညျတယျ.ထကျဘကျကလဲကြောငျးစာကို ကွိုးစားရမယျဆိုပွီးပွောထားတာ..လုပျခငျြတာ လုပျစာမေးပှဲမကရြငျပွီးရော..မူးယဈဆေးမသုံးရငျပွီးရော ကနျြတာကတော့ခှငျ့လှတျတယျ…တဈခါတဈလဆေိုရယျရတယျသိလား….မမေကေိုဖုနျးနဲ့ကွူ နတေဲ့ဘဲကွီး တှကေို ထကျက ဟောကျလှတျတာ….ဟိ.. အမကေ နောကျထပျအိမျထောငျမပွုဘူးပေါ့..ဒါဆို.. အမလေ..ကိုရေ…ပွောမနနေဲ့ အမကေို လိုကျနတေဲ့ ဘဲကွီးတှေ၊ဘဲလေးတှတေဈပုံကွိး၊ထကျတို့အသကျအရှယျ ကောငျလေးတှတေောငျပါသေး…။မမေကေ ထကျအိမျထောငျကမြှ အိမျထောငျပွု မယျပွောတာပဲ..အငျးလေ…. ထကျနားလညျပေးရမှာပေါ့။ သူလဲသှေးသားနဲ့ပဲလေ..အသကျ(၃၀)ကတညျးကမုဆိုးမဖွဈတာ….အခုဆိုသူ(၄၁) နှဈရှိနေ ပွီ..မိနျးကလေးခငျြးဆိုတော့ ထကျနားလညျပေးနိုငျပါတယျ။ထကျနဲ့ကို နဲ့ဒီလိုမြိုးခဈြကွရငျမမေကေို့အား နာမိတယျ..သိလား..ကို…
ဘာလို့လဲ..ထကျရဲ့ အျော..သူလဲသှေးသားနဲ့ပဲလေ…ထကျကို ငဲ့ပွီးတော့ နောကျအိမျထောငျမပွုပဲနတော ဒါကိုထကျက သူ့ကိုမငဲ့ပဲ ..ကိုနဲ့.. ကိုနဲ့..ဘာဖွဈလဲ ထကျရဲ့(မောငျတုတျတမငျမေးလိုကျတာပါ။) ကိုနဲ့ လုပျကွတာလေ….လိုးတာလေ..သိပွီလားးလိုးတာ… ဒါဆိုလဲ ထကျရယျ…မမေကေို့ ဝပေေးလိုကျ ပေါ့(တမငျသှေးတိုးစမျးပွီးမေးကွညျ့တာ) ဘာကိုဝပေေးရမှာလဲ..ဟငျ့အငျး..ကိုရယျ..အဲ့လိုကွီးတော့မကောငျးပါဘူး…မမေကေလိုခငျြလှနျးလို့တောငျးဆို လာရငျတော့လဲ ပေးရမှာပေါ့။ဒါပမေဲ့ မမေနေဲ့ဖွဈပွီးရငျတော့ ကိုနဲ့ထကျလမျးခှဲမှာ… ဟငျ..ဘာဖွဈလို့လဲ..ကို..ကစကားအဖွဈပွောတာပါ။ အငျး..သိပါ တယျ။။ထကျကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြပါ…မမေတေောငျးဆိုလာသညျ့တိုငျအောငျထကျမငွငျးပါဘူး ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီလူကိုလေ ထကျဘယျလောကျထိခဈြနပေါစေ လုံးဝလုံးဝလကျမထပျဘူးသိလား.. ကနြျောမောငျတုတျသကျပွငျးလေးခလြိုကျမိပါတယျ။
ဘာတှသေကျပွငျးခနြတောလဲ..သိတယျနျော..ဟှနျး..ဆရာမကပါကငျဖှငျ့လိုကျလို့ကလြာတာဆိုတော့ အသကျကွီးကွီးတှနေဲ့ မဈဖျလိုဖျခရဈဆဈ ဖွဈနေ တာလား.ဟှနျး..သူမြားအမကေို….ကိုနျော.. အာ..မဟုတျပါဘူးကှာ…နောကျတဈခြီထပျလုပျဖို့တောငျးဆိုမလို့ပါ….ဟိဟိ ဟှနျး…ဒါကွီးက ကဲကိုကဲ တယျ….လို့ဆိုပွီးထကျထကျတဈယောကျ စောငျအောကျထဲကိုခေါငျးတိုးဝငျသှားပါ တယျ။သိပျမကွာခငျမှာပဲ ကြှနျနေျာ့လိငျတံကွီးဟာ ပူနှေးတဲ့အာငှရေဲ့ထိ တှမှေု့ကိုခံစားလိုကျရပါတော့တယျတနေ့…ထကျထကျမှာထားတဲ့ ဒီဗီဒီခှတှေကေို အိမျကိုသှားပို့ဖွဈပါတယျ။ထကျထကျက နောကျဆုံးထှကျထား တဲ့စပါ တာဂတျအခှတှေကွေညျ့ခငျြတယျလို့ဆိုလာတာနဲ့ခဈြသူရဲ့စိတျအလိုတျောကအြတိုငျး မောငျတုတျတဈ ယောကျ ခိုးကူးရောငျးတဲ့ဆိုငျမှာဝယျပွီးသှားပေးပါ တယျ။ဖွဈခငျြတော့ ထကျထကျက သူမအဖှားအိမျကိုသှား နတေယျခငျဗြ။ယောက်ခမကွီးတဈယောကျထဲအိမျမှာ။သူလဲရုံးကပွနျလာခါစနဲ့တူပါတယျဗြာ။ရုံး ယူနီဖောငျးမခြှတျ ရသေးပဲအိမျရှေ့ဧညျ့ခနျးထဲမှာထိုငျနတေယျခငျဗြ။
ကနြျောဝငျလာတာလဲမွငျရော ရုတျတရကျကွောငျသှားပွီး ဟဲ့ကောငျလေး…ထကျ ထကျမရှိဘူးလေ..ဘာလာလုပျတာလဲ ….လို့မေးပါတယျ။ကနြျောလဲထကျထကျကအခှေ တှလောပေးခိုငျးလို့လာပေးတာဖွဈကွောငျးပွောတော့ယောက်ခမ ကွီးက အျော..အေး..ဟုတျတယျ..အနျတီသူ့ကိုဝယျခိုငျးထားတာ…ကွညျ့စမျး..သူမြားကိုဝယျခိုငျးလိုကျပွနျပွီ..ကိုယျတိုငျမလုပျဘူး..မိထကျကတော့..ဒီလို ပဲ… ရပါတယျအနျတီရယျ..ကနြျောကသူစိမျးမှမဟုတျတာပဲ..ရော့ဒီမှာအနျတီမှာထားတယျဆိုတဲ့အခှတှေေ.. ကနြျောယောက်ခမကွီးကိုအခှတှေလှေမျး ပေးလိုကျပါတယျ။ပါးစပျကယောငျပွီးအနျတီမှာထားတဲ့အခှတှေလေို့ ထှကျသှားတာကိုပွနျဘရိတျအုပျခြိနျမရတော့ပါဘူး.။သူမှာထားတာက စပါတာကပျ အခှတှေလေဗြော… ကနြျောလှမျးပေးလိုကျတဲ့အခှတှေထေညျ့ထားတဲ့အမညျးရောငျကြှတျကြှတျအိတျအထုတျကိုလှမျးယူပွီးအခှေ တှကေိုထုတျပွီး ယောက်ခမကွီးကကွညျ့ပါတယျ။ပွီးတော့သူမရဲ့မကျြနှာမှာအပွုံးတဈခုကိုတှရေ့ပါတယျ။အကယျြ ခြဲ့ပွီးတှေးမယျဆိုရငျတော့အဲ့ဒီအပွုံးဟာ အကွံအစညျ တဈခုခုရသှားတဲ့အပွုံးလို့ထငျပါတယျဗြာ. သား…တခုခုသောကျပါလား……အပူလား…အအေးလား…. အငျး။။ရပါတယျ အနျတီ။။အဆငျပွတောပေါ့။။။
ဒါဆိုခနစောငျ့…အနျတီသှားလုပျလိုကျမယျ… ပွောပွဆေိုဆိုနဲ့ကနြေျာ့ရှကေ့နဖွေတျသှားပွီးနောကျဖေးခနျးထဲဝငျသှားတဲ့ယောက်ခမကွီးရဲ့နောကျပိုငျးအလှ ဟာ အနကျရောငျစကဒျအောကျက အတှငျးခံဘောငျးဘီရာကွီးနဲ့လုံးဝနျးစှငျ့ကားနပွေီးလမျးလြှောကျလိုကျတိုငျး တဈလုံးခငျြးစီတုနျခါသှားတဲ့တငျပါးကွီး တှဟောတကယျ့ဂန်တဝငျ(သရုပျဆောငျမဟုတျ)အလှဆိုရငျငွငျးမဲ့လူမရှိ ဘူးလို့ထငျပါတယျဗြာ။နောကျဖေးဝငျသှားတာ (၃)မိနဈလောကျပဲကွာမယျထငျပါ တယျ။ကျောဖီခှကျနှဈခှကျကို ကိုငျရငျးပွနျထှကျလာတာကိုတှရေ့တယျ။ ရော့သား..ကျောဖီသောကျအုနျး… ဟုတျ… သူမလဲ ကြှနျတေျာ့ရှမှေ့ာထိုငျရငျး ကျောဖီသောကျနပေါတယျ။သိပျမကွာပါဘူး။ကြှနျတျောဝယျလာတဲ့အခှတှေေ ထညျ့ထားတဲ့အိတျကိုယူပွီးတော့ အခှတှေထေဲကတဈခှကေိုရှေးပွီး ဆိုဖာ ပျေါကနအေောကျကိုဒူးထောကျထိုငျ ခလြိုကျပွီးအရှမှေ့ာရှိတဲ့ဒီဗီဒီစကျထဲကိုဖငျကွီးကုနျပွီးအခှထေညျ့ပါတယျ။ပရိတျသတျကွီးပဲစဉျးစားကွညျ့တော့ ဗြာ။
ဖငျလုံးကွီးတှလှေလှနျးတဲ့အနျတီကွီးတဈယောကျဒူးဖုံးစကဒျနဲ့ကြှနျတျောရှမှေ့ာဖငျကုနျပွနတောမြားဗြာ။ လုံးဝနျးပွီးအတှငျးခံဘောငျးဘီအရာကွီးကိုထငျး နတောပဲ။ကိုငျပွီးဆောငျ့လိုကျရရငျအနှဈပဲလို့တှေးနခြေိနျမှာပဲ …ဟိတျကောငျလေး..ကျောဖီတှမှေောကျကုနျမယျနျော..ဘာတှကွေညျ့နတောလဲ …..ဆိုတဲ့ သူမရဲ့အသံထှကျ လာပါတယျ။ဟုတျပါတယျ။တီဗီမှမဖှငျ့ရသေးတာ။တီဗီမှာကနြျောသူ့ကိုကွညျ့နတောကိုသူမပွနျမွငျနရေပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့စပါတာ ကပျ တယျဆိုပါတော့။ရောမလူထှားကွီးတှခေလြိုကျကွ၊နှကျလိုကျကွ၊အီတာလြှံသူလေးတှကေလဲ ရဆေေးငါးတှလေိုဖွူဖွူဝငျးဝငျးကွီးတှနေဲ့နို့တှဖေျောပွီး သရုပျဆောငျ..ဒီလိုနဲ့ကောငျးခနျးရောကျလာတဲ့အခါမှာ ကြှနျတေျာ့ယောက်ခမကွီးတော့ဘယျလိုနတေယျမသိဘူး..ကြှနျတျောကတော့ညီတျောမောငျခေါငျး ထောငျလာပွီး သကာလ နှာမှုတျအသကျရှုသံတှပွေငျးလာပါတော့တယျခငျဗြာ။ကြှနျတျောသူမကိုကွညျ့လိုကျတော့လဲမကျြလုံး တှကေမကျြမှနျအမဲကြှဲကိုငျး အောကျမှာအရညျတှလေဲ့ပွိးကွညျ့နတော..ဒီလိုနဲ့ကြှနျတျောနဲ့အကွညျ့တှဆေုံသှားတဲ့အခြိနျမှာ မငျးသားကိုမငျးသမီးကတီဗီထဲမှာ ပလှကေိုငျပေးနပေါပွီ။
နှဈယောကျသားမကျြနှာခငျြးဆိုငျမိခြိနျမှာတော့သူမကစပွိးပွုံးပွလို့ကနြျောလဲအူကွောငျကွောငျလီးတောငျလြှကျပဲပွနျပွုံးပွလိုကျပါတယျ။ပွီးတဲ့နောကျမှာ တော့ယောက်ခမကွီးကမပွောမဆိုနဲ့ အခှထေညျ့တုနျးကအနအေထားအ တိုငျးဒူးတုတျထိုငျခလြိုကျပွီးအခှရှေေးနသေယောငျနဲ့ဖငျကွီးထပျကုနျးပွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့စိတျတှမေုနျယိုနပေါ ပွီ။အကယျလို့အတှငျးဆှဲပွီးလိုးလိုကျရငျလဲ ပွသနာမရှိနိုငျဘူးလို့တှေးမိပွနျတယျ။ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ကနြေျာ့ ဟာသူမ သမီးရဲ့ခဈြသူလေ…။ဒါပမေဲ့စိတျကမရဲပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ခွထေောကျကျမထိတထိသူမဖငျသားကွိးတှေ ကိုခွမေနဲ့သှားထိကွညျ့ပါတယျ။ကောငျးလိုကျတဲ့ အထိအတှဗြေ့ာ။ဒါတောငျခွမေနဲ့တို့သလိုပဲရှိပါသေးတယျ။ဒီလို မြိုး(၃)ခါလောကျမတျောတဆလိုလိုဘာလိုလိုလုပျပွီးတဲ့အခြိနျမှာ.. ဟဲ့ကောငျ လေး..လူကွီးကိုခွထေောကျကွိးနဲ့ငရဲကွီးမှာမကွောကျဘူးလားဆိုပွိး ပွုံးရငျးပွနျပွောတဲ့အသံကိုကွား တော့… ဟငျ့အငျး..မကွောကျပါဘူး.. မကွောကျ ဘူးဆိုလာခဲ့လေ။။။။
ခငျဗြားတို့သိတဲ့ကိုမောငျတုတျဟာဒီလောကျတော့မတုံးမအသေးပါဘူး။စှခေ့နဲဆိုယောက်ခမကွီးရဲ့ဘေးကိုငုတျတုတျကွီးရောကျသှားပွီးသူမခါးကနပွေီဖကျ လိုကျပါတယျ။ပွီတဲ့နောကျမှာတော့တငျပလငျခှထေိုငျပွိးသူမကိုယျလုံးကိုရငျဘတျထဲဆှဲသှငျးလိုကျပါတယျ။ယောက်ခမကွိးကမကျြလုံးမှိတျထားပမေဲ့ပွုံး ယောငျသမျးနတေဲ့နှုတျခမျးကိုငုံစုပျလိုကျခြိနျမှာနှုတျခမျးနီတှဆေိုးထားလို့မှေးတေးတေးဖွဈနပေမေဲ့သူမရဲ့အနမျးကွမျးကွမျးတှနေဲ့ပွနျလညျတုနျ့ပွနျမှု ကွောငျ့ ကြှနျတျောလကျတှဟောမရိုးမရှဖွဈလာပွီးသူမကိုသိုငျးဖကျထားရာကနသေူမရဲ့စကဒျပျေါက ဖငျသားတှကေိုကိုငျတှယျနရေငျးအတှငျးခံအရာကွီး ကိုလကျနဲ့ဆတျခနဲဆှဲလိုကျပွနျလှတျပေးလိုကျလုပျနတေဲ့အခါမှာတော့ဖတျခနဲဖတျခနဲအသံတှတေောငျမွညျလာပါတယျ။ယောက်ခမကွီးပှဲစကွမျးပါပွီ။သူမ ရဲ့လကျတှဟော ကြှနျတေျာ့လိငျတံကိုပုဆိုးအပျေါကနလောကိုငျတဲ့အတှကျလိငျတံကွီးဟာအငျမတနျမာကြောလှနပွေီပေါ့။ဒီလိုနဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈ ယောကျခပျကွမျးကွမျးနမျးရငျးဘယျလိုဘယျလိုယောက်ခမကွိးရဲ့အကြီ င်္ကွယျသီးတှဖွေုတျမိ တယျမသိပါဘူး။ကနြျောသတိထားမိခြိနျမှာတော့ကြှနျတျော လဲအပျေါပိုငျးဗလာကငျြးနပွေိး..ယောက်ခမကွီးရဲ့ရုံး ဝတျစုံ(ရှပျအဖွူနဲ့စကဒျအမဲ)အကြီင်္ င်္ကယျြသီးတှဟောတဈလုံးမကနျြပှငျ့ထှကျနပေါပွီ။
အရမျးမကွီးပမေဲ့အောကျကိုအနညျးငယျတှဲနသေယောငျရှိတဲ့သူမနို့အုံဖွူဖွူကွီးတှကေိုစညျးနှောငျထားတာက ဘရာဇီယာခရမျးရောငျလေးပါ။မောငျတုတျ လကျတှကေလဲ ဘရာဇီယာပျေါကနပွေိးသူမနို့တှကေိုအုပျမိုးပွီးကိုငျ ထားရာကနပွေီး ယောက်ခမကွီးက.. အခနျးထဲသှားကွမယျလေ… မောငျတုတျတို့လဲ တီဗီကိုပိတျပွီးယောက်ခမကွိးအခနျးထဲကိုယောက်ခမကွိးတငျပါးတှကေိုလကျတဈဖကျကဆုတျ ကိုငျရငျးဝငျလာခဲ့ပါတော့တယျ။အခနျးတံခါးကိုပိတျလိုကျ တယျဆိုရငျပဲမောငျတုတျကပုဆိုးကိုခြှတျခလြိုကျပွီး သူမကတော့ သူမအကျြိကိုခြှတျလိုကျပါတယျ။ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့စကဒျကိုဘေးဇဈကိုဖွုတျလိုကျ ခြိနျမှာ တော့မောငျတုတျတှခေဲ့ရတဲ့သူမတငျပါးကွီးတှကေအရာထငျးထငျးကွီးတှဟောအနီရောငျကိုကိုယျစားပွုတယျ လို့သိလိုကျရပါတယျ။စှငျ့ကားတဲ့ တငျပါးကွီးတှကေိုဇာနားကှပျတှပေါတဲ့အတှငျးခံအနီရောငျကိုခြှတျမယျလုပျတဲ့အခါမှတော့..မောငျတုတျက.. မ..မခြှတျနဲ့အုနျး…ခနလေး..ဒီအတိုငျး.. ဟယျ..မငျး..ဘယျလိုချေါလိုကျတယျ… မ..လို့ချေါတာလေ……ဘာဖွဈလို့လဲ.. တျောလိုကျတာ…မောငျရယျ.. ယောကျခမနဲ့ကြှနျတျော..မနဲ့မောငျဖွဈသှား ကွတဲ့အခြိနျမှာတော့မောငျတုတျကအတှငျးခံအမဲရောငျလေးနဲ့သူမကတော့ဘရာဇီယာခရမျးရောငျလေးရယျအတှငျးခံအနီရောငျလေးရယျနဲ့ ကနြျောတို့နှဈ ယောကျခုတငျပျေါမှာ တဈယောကျပျေါတဈယောကျထပျလြှကျလှဲခလြိုကျပါတယျ။ထုံးစံအတိုငျးမောငျတုတျကအပျေါကသူမက အောကျကပေါ့။
မောငျတုတျ တဈယောကျသူမရဲ့မကျြနှာတဈခုလုံးကိုလိုကျနမျးနရေငျးနှုတျခမျးခငျြးစုတျလိုကျ နားရှကျလေးတှကေိုကိုကျလိုကျလုပျလိုကျလုပျပေးနပေါတယျ။မောငျတုတျ လကျတှကေတော့သူမရဲ့ဘရာဇီယာ ကိုအတှငျးထဲလကျနှိုကျပွီးတော့သူမနို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုပှတျခပြေေးနတောပါ။.နို့သီးခေါငျးလေးတှဟောမာကြော လာတယျဆိုတာကိုမောငျတုတျရဲ့အထိအတှကွေ့ောငျ့သိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှတော့မကျြနှာကိုနမျးတာရပျပွိး ဘရာဇီယာကိုမခြှတျပဲနို့တှကေိုဆှဲထုတျလိုကျပွိး သူမနို့သီးခေါငျးအညိုရောငျမာကြောကြောလေးတှကေိုလြာနဲ့ ယကျလိုကျ၊စို့လိုကျလုပျပေးခြိနျမှာတော့ အားး…ကောငျးလိုကျတာ..အငျးး…အငျးးး..ဟ ငျးး..အီးး..ရှီး..အားးးး သူမထံကညညျးသံလေးတှခေပျကယျြကယျြထှကျလာပါတယျ။မောငျတုတျလဲလကျတှကေိုအနားမနပေဲသူမရဲ့ စောကျဖုတျနရောကို မှနျပွီးအတှငျးခံဘောငျးဘိအနီရောငျပျေါကနပွေီးစမျးလိုကျတဲ့အခါမှတော့အတှငျးခံဂှကွားနရောမှာစိုစှတျနပေါတယျ။ဒီလိုနဲ့မောငျတုတျတဈယောကျနို့တှေ စို့တာရပျပွီးအဆီအနညျးငယျစုနလေို့ဆူနစေပွု နတေဲ့ဝမျးဗိုကျသာဖွူဖွူတှကေိုလြှာလေးနဲ့မထိတထိကလိရငျးအောကျကိုတဖွညျးဖွညျးဆငျးလာပွိးသူမ ရဲ့ပငျတီနရောရောကျတော့ပငျတီကိုမခြှတျပေးပဲစောကျဖုတျရှိနတေဲ့နရောကိုဆှဲလှနျလိုကျပွိးတော့သူမစောကျဖုတျကိုစတငျလလေ့ာပါတော့တယျ။အမှေး ကွမျးကွမျးတှပေေါကျနတေဲ့ဆီးခုံမှေးတှအေောကျကနီအာနတေဲစောကျဖုတျမှာခြှဲနတေဲ့စောကျရညျတှနေဲ့အပွညျ့ပေါ့။ဒီကွားထဲမှာစောကျဖုတျကိုဖွဲလိုကျ ရငျပျေါလာတဲ့အစိနီနီလေးတှကေိုလြှာနဲ့တို့လိုကျခြိနျမှတော့မောငျတုတျတဈယောကျငံကြိကြိအရသာကိုခံစားရပွီးသူမကတော့အိပျယာခငျးစကို လကျနှဈ ဖကျကားပွိးဖမျးဆုတျလိုကျပါတယျ။
အား..အားးးး..ကောငျး။….ကောငျးလိုကျတာ..အီးးးးးရှီးးးအငျးးးးဟားးးဟားးး မောငျတုတျစပွီးတော့ဂြာနပေါပွိ။သူမကတော့ကုတငျပျေါမှာလကျနှဈဘကျ ကိုကားထား၊ကားထားတဲ့လကျနှဈဘကျကလဲအိပျယာခငျးစတှကေိုဆုတျကိုငျရငျးနဲ့ကော့လနျနပေါပွီ။(၁၀)မိနဈလောကျအဖုတျကိုယကျလိုကျ၊အစိ ကိုစုပျ လိုကျလုပျပေးခြိနျမှာတော့သူမအရှိနျတှမွေငျ့လာပွီးတော့မောငျတုတျဆံပငျတှကေိုဆုတျကိုငျလာပါတယျ။အားပါလာတဲ့အခြိနျသတိထားမိတာကတော့ စောကျဖုတျအရညျတှအေတျောလေးထှကျပွီးသူမပွီးသှားပါတော့တယျ….။ အား..ရှီး…ကြှတျကြှတျ..ကောငျးလိုကျတာမောငျလေးရယျ…မ..တခါပွီးတယျ သိလား.. အငျး..နှဈယောကျပွိုငျတူစုပျရအောငျနျော.. မောငျတုတျတဈယောကျနရောပွောငျးလိုကျပါတယျ။သူမလဲကုတငျပျေါကထပွိးအတှငျးခံကိုခြှတျပွီး မောငျတုတျ ဘကျကိုကြောပေးပွီးတကျခှပါတယျ။မောငျတုတျအတှငျးခံကိုသူမကပါးစပျနဲ့ညှပျပွီးခြှတျပေးခြိနျမှာတော့ဒုံးပြံ့တစငျးအလားထောငျမတျနေ တဲ့လီးကွီးကိုစတငျပွီးစုပျပါတော့တယျ။ယောက်ခမကွိးရဲ့လိးစုပျပညာကတော့အံမခနျး ပါ။ထကျထကျတဈယောကျလဲအမတေူလေးမို့ထငျပါတယျအစုပျ အမှုတျအရမျးကောငျးပါတယျ။ယောက်ခမကွီးဆီ ကထူးခွားတာကတော့ 69ပုံစံနဲ့စုပျနတေဲ့အခြိနျမှာဖငျကွိးကိုယမျးပွီးတော့စောကျဖုတျနဲ့ကနြေျာ့မကျြနှာကို ပှတျ တာပါပဲ။(၁၅)မိနဈလောကျစုပျပွီးမှုတျပွိးသှားတဲ့အခါမှာတော့သူမကပဲ ဦးဆောငျပွီးပုံစံပွောငျးပါတယျ။ပွောငျး တဲ့ပုံစံကတော့သူမကအပျေါကပါ။
ပကျလကျလှနျပွီးလီးတောငျထားတဲ့မောငျတုတျလီးရှတေ့ညျ့တညျ့ကိုတဈ ခကျြထဲကိုထိုငျခလြိုကျပွီးတော့အရှအေ့နောကျဖိပှတျလိုကျ၊ဆောငျ့လိုကျ၊စကော ဝိုငျးမှလေိုကျနဲ့ယောက်ခမက စိတျကွိုကျလိုးနပေါတယျ။ကောငျးလှနျးလို့မောငျတုတျတဈယောကျပွီးသှားမှာဆိုးလို့မနညျးကိုထိမျးနရေပါတယျ။ သူမ ဆောငျ့ ခကျြတှကွေောငျ့မောငျတုတျတဈယောကျဖီလငျတှငေယျထိပျရောကျပွီးမကျြလုံးတှတေောငျမှေးစငျး နရေပါတယျ။သူမနောကျတဈခေါကျပွိးသှား ဟနျတူပါတယျ။အငျမတနျကွမျးတဲ့ဆောငျ့ခကျြတှကေနအေရှိနျသေ သှားပွီးမောငျတုတျအပျေါကိုမှောကျကလြာပါတယျ။မောငျတုတျလဲ နို့တှကေိုလကျနဲ့ ညှဈပေးပွီးသူမကိုဖမျးထိမျး ထားပွီးဒူးကိုထောငျကာ လေးငါးဆယျခကျြလောကျဆောငျ့ပေးတဲ့အခြိနျမှာယောက်ခမကွီးအသံတောငျမထှကျ နိုငျတော့ပဲ အသကျရှုသံပွငျးပွငျးတှသောကွားနရေပါတော့တယျ။ဒါပမေဲ့ဇကတော့မသေးတဲ့ယောက်ခမကွိးက မောငျ..စိတျကွိုကျလုပျနျောလို့ပွောရငျး…မောငျတုတျ ပျေါကတကျခှနရောကနဆေငျးလိုကျပါတယျ။မောငျတုတျ ပေါငျတှေ၊ဥတှမှောယောက်ခမကွိးဆီကထှကျတဲ့အရညျတှရှေဲလို့နပေါတယျ။
သူမကဘယျလိုနေ ပေးရမလဲဆိုတဲ့ အကွညျ့နဲ့ကွညျ့တော့မောငျတုတျကိုယျတိုငျပဲလိုခငျြတဲ့ပုံစံကိုပွငျယူလိုကျပါတယျ။ဒီလောကျအိုးကောငျးတဲ့စျော ကွီးကိုကုနျးခိုငျးပွီးမ လုပျ၇ငျမောငျတုတျတဈယောကျ ခှေးဖွဈပွီပေါ့ဗြာ။သူမကိုကုတငျစောငျးမှာပဲလကျထောကျ ပွီးခါးကိုခှကျကာကုနျးခိုငျးပါတယျ။အလိုကျသိလှနျးတဲ့ ယောက်ခမကွီးကခေါငျးအုံးကိုရငျဘတျထဲမှာပိုကျပွီးကုနျး နတောမို့ခါးကခှကျနပွေီးဖငျပူးတောငျးထောငျနသေလိုဖွဈနပေါတယျ။မောငျတုတျတဈယောကျ အားမနာနိုငျပဲ ယောက်ခမကွီးရဲ့စှငျ့ကားတဲ့တငျပါးကွိးတှကေိုလကျနှဈဘကျနဲ့စုံကိုငျညှဈပေးပွီးအားပါးတရဆောငျ့ပေးနပေါ တယျ။(၁၀)မိနဈလောကျကွာ တော့မောငျတုတျပွီးခငျြလာတာနဲ့ ယောက်ခမကွိးကိုပကျလကျပွနျလှနျလိုကျပွီး လှထေိုးကွီးပုံစံနဲ့တဈမြိုးတဈတီတူးခွထေောငျပုံစံနဲ့တဖုံဆျောပေးနရေငျး မောငျတုတျတဈယောကျပွီးခငျြလာပါ တယျ။ဒါကွောငျ့ မ..ပွိး..တော့တယျ..အားး..ရှီး..ဘယျမှာပွီးရမလဲ..မ… အပွငျထုတျလိုကျ..မောငျ…ကွိုကျသလို ပွီး..အပွငျမှာ… အငျး… မောငျတုတျတဈယောကျလိုးနရေငျးနဲ့ယောက်ခမကွီးခြှတျထားတဲ့မကျြမှနျကိုပွနျတပျပေးလိုကျပါတယျ။
ကြှဲကိုငျး မကျြမှနျအမဲရောငျ နဲ့ပိုပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိသှားတဲ့မောငျတုတျယောက်ခမကွိးကိုနုိ့တှကေိုဖွဈညှဈရငျးနို့သီးခေါငျးတှကေိုဆှဲရငျးလိုးကာလိငျတံ တဈလြှောကျမှာကငျြခနဲဖွဈသှားလို့ လီးကိုကပွာကယာဆှဲနှုတျလိုကျပွီးယောကျခမရဲ့ ရငျဘတျပျေါကိုခှလိုကျကာ သူမမကျြနှာပျေါကိုလိငျရညျဖွူဖွူတှေ ပနျးခလြိုကျပါတယျ။လိငျရညျတှေ ဟာသူမ မကျြမှနျထိစငျကုနျတာကွောငျ့အောကားထဲကအတိုငျးကိုဖွဈသှားပါတယျ။ အဲ့ဒီနကေ့သူမကို မောငျတုတျ(၃)ခြီ ဆှဲပေးလိုကျပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာထကျထကျလဈရငျလဈသလိုခိုးစား နခေဲ့တာ ထကျထကျနဲ့ပွသနာမတကျခငျအထိပေါ့။ဒါပမေဲ့ယောက်ခမကွိးကလိုအပျခြိနျတိုငျးမှာနပေေးအုနျး မယျဆိုတာ ယနအေ့ထိပွောနတေုနျးပါပဲ။ ပွီးပါပွီ။
မောင်တုတ်အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်တုန်းကပေါ့။ကျောင်းကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ရည်းစားဖြစ်တယ်။ဒါလဲသိပ်အဆန်းကြီးတော့မဟုတ်လှပါဘူး။လူငယ်သဘာဝချစ်ကြ၊ကြိုက်ကြ၊ဟော်တယ်ခေါ်ဆွဲလိုက်ကြဆိုတော့မထူးတော့မထူးဆန်းပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ပြီး(၃)လလောက်နေတော့သူမအိမ်ကိုမောင်တုတ်ဝင်ခွင့် ထွက်ခွင့်လက်မှတ်ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ထက်ထက်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့။ထက်ထက်တို့အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ချောင်းပေါက်မတက်သွားတော့တာပေါ့။မနက်ပိုင်းဆို ကျောင်းသွားဖို့ဝင်ခေါ်တယ်။ညနေဆိုပြန်ပို့တယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုကျူရှင်အကြောင်းပြပြီးဟော်တယ်ဒိုး တယ်ပေါ့။မောင်တုတ်မိဘတွေကလဲ သူတို့သားလေးသွားလာရေးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကားအစုတ်တစ် စီးဝယ်ပေးထားတော့ မြင်းကိုအတောင်ပံတပ်ထားသလိုစိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
ထက်ထက်အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရတာနဲ့မနက်တိုင်းကျောင်းသွားဖို့ကြိုပေးရတာ ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ထက်ထက်တစ်ယောက်အိပ်ယာထနောက်ကျနေတဲ့နေ့ဆိုရင်မောင်တုတ်တစ်ယောက် အိမ်ထဲမှာထိုင်စောင့်ပေရော့ပဲ။ယောက္ခမကြီးကတော့စကားကိုတစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစလာပြော၊ပြီးတော့ကော်ဖီဖျော် ပေး၊ပြီးသူမလဲရေမိုးချိုးဖို့ပြင်ရတာပဲဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မောင်တုတ်ယောက္ခမကြီးဟာ နာမည်ကြီးမြို့လယ်က ဟော်တယ်တစ်ခုမှာရာထူးအကြီးကြီးမန်နေဂျာမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျာ။ထက်ထက်တို့ကအဖေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခုပေါ့။(အင်းလေ..တစ်ခုစီပဲပါမှာပေါ့။အပိုတော့ဘယ်ပါမလဲဗျ…နော့)။ ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ….း) ထက်ထက်တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းကြာနေတဲ့နေ့မျိုးဆိုရင်တော့သူ့အမေကပဲအရင်အလုပ် ကိုထွက်သွားတာဗျ။ကျနော်နဲ့ထက်ထက်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနေ့မျိုးဆိုရင်တော့ မောင်တုတ်တစ် ယောက်ကျောင်းမှန်မှန်တက်စာမခက် ခက်ချင်လဲခက်ဒို့မတက်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းမတက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ယောက္ခမအ လုပ်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်တံခါးတွေပိတ်လိုက်နော်..သားဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ စစ်တပ်ကစစ်သားတွေ အော်သလိုမျိုး ဟုတ် ….ဆိုတဲ့ဝမ်းခေါင်းသံကြီးနဲ့အော်ပြီးတော့ တံခါးပိတ်ပြီးထက်ထက်ဆီကိုပြေးတော့တာပေါ့။ တစ်ရက်တော့ဒီလိုမျိုးနေ့တစ်နေ့မှာလူမိသွားခဲ့တယ်။ယောက္ခမကြီးကဟမ်းဖုန်းကျန်ခဲ့လို့လာယူတာနဲ့ကြုံရော။ သူ့ဆီမှာလဲသော့တစ်စုံရှိတယ်လေ။တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ မောင်တုတ်ကလဲကားကိုအဝေးကြီးမှာရပ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်များသိသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖိနပ်လေးကိုလဲခါးကြားထိုးပြီးချစ်သူအခန်းထဲမှာသိမ်းထား ရတာကတော့ ထက်ထက်ရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကိုလိုက်နာတယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့။ယောက္ခမကြီးက ကျွန်တော်တို့သွား ပြီဆိုပြီးသူ့သော့နဲ့သူဖွင်ပြီးဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ဒီနေရာမှာထက်ထက်တို့ အိမ်ရဲ့လိုကေးရှင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောပါရစေ ထက်ထက်တို့က တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးဗျ။အိပ်ခန်း(၃)ခန်းရှိတယ်။၂ခန်းကကပ်လျှက်ပေါ့။ပြီးတော့တစ်ခန်းက မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ။ယောက္ခမကြီးတို့လင်မယား(သူ့ယောင်္ကျားရှိစဉ်အခါက)နေတဲ့အခန်းမှာထက်ထက်အမေ နေတယ်။ဘေးကပ်ရက်အခန်းမှာကထက်ထက်အခန်း၊မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့။ပြီးမှ နောက်ဖေးမှာမီးဖိုနဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျှက်။အဲ..ဘယ်ရောက်သွားပြန်လဲမသိဘူး..ပြန်ဆက်မယ်။ယောက္ခမ ကြီးကဖုန်းကျန်ခဲ့လို့ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ကလဲဖြစ်ချင်တော့ရေချိုးခန်းထဲကရေချိုးပြီးပြန်လာတဲ့ ထက်ထက်ကိုထမိန်ရေလျားနဲ့မြင်တော့ စိတ်မထိမ်းနိုင်ပဲ ဆွဲပြီးကျုံးတဲ့အချိန်။အခန်းတံခါးကိုဟခဲ့မိတယ်ဗျာ။
အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ခဲ့တော့ မောင်တုတ်တစ်ယောက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားလိုက်တာပေါ့လေ။ ချစ်သူလေးထက်ထက်က ရေလျားလေးနဲ့လှုပ်လီလှုပ်လဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးလျှာလေးထုတ်ပြလိုက်တော့ စိတ်တွေသောင်းကျန်းလွန်းလို့အဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပြီး ထက်ထက်အခန်းထဲမှာကောက်ပြီးကော့နေ တဲ့ဖင်လေးကိုကုတင်စောင်းမှာတင်ပြီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်သားဖွေးဖွေးကောက်ကောက်လေးတွေကို လက်နဲ့အားရပါးရညှစ်ပြီးဆောင့်ပေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ထက်ထက်ကလဲထန်တဲ့မိန်းကလေးအမျီုးအစားထဲမှာပါ တယ်လေ။နဲနဲဆွတာနဲ့အရည်တွေကများများထွက်၊လီးဝင်တာနဲ့စိတ်ကိုလွှတ်ပြီးအော်တက်တော့မောင်တုတ် အကြိုက်တွေ့ပေါ့။ဒီလိုမျိုးချစ်သူလေးကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးဆောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ…တစ်ဘက်ခန်းက တံခါးဖွင့်သံလဲကြားရောနှစ်ယောက်သားဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ရော။မောင်တုတ်ရောထက်ထက်ရောဖင်တုံးလုံး လေးတွေနဲ့တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီးပြီုင်တူကြည့်မိတာက အခန်းတံခါးကို။အခန်းတံခါးကလဲ ဟစိလေးဖြစ်နေ။မောင်တုတ်ဆိုပိုဆိုးသေး ဂွေးတန်းလန်းနဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းကိုမသိတာ…။ထက်ထက် ကတော့ ကမန်းကတန်းထမိန်ကိုကောက်ပြီးရေလျားပြီး ဟန်မပျက်နေဆိုတဲ့အမူအယာနဲ့အကျီ င်္တွေဝတ်ခိုင်ပြီး ဖောရှောသွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။မောင်တုတ်လဲတုန်တုန်ရီရီနဲ့ အကျီ င်္နဲ့ပုဆိုးကိုကောက်ဝတ် ပြီးထက်ထက်တို့ဘာများပြောနေလိမ့်မလဲဆိုပြီးအခန်းတံခါးအကွယ်လေးမှာနားပါးပါးနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်နေမိ တယ်။သူတို့သားအမိနှစ်ယောက်ပြောတာကြားတော့ ခုနကကြောက်စိတ်နဲ့တောင်တာလျော့သွားတဲ့လီးတောင် ပြန်တောင်လာမိပါတော့တယ်။
သူတို့ဘာတွေပြောနေကြသလဲဆိုတော့…. မိထက်…ငါကညည်းကိုကျောင်းသွားပြီတောင်ထင်နေတာ..နင်ကဟော်တယ်ခသက်သာအောင်လုပ်နေတာ လား… အာ…အမေကလဲမဟုတ်ပါဘူး..မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ။ပြီးတာနဲ့ကျောင်းသွားမှာပါ။ ဘယ်နှချီပြီှးမှကျောင်းသွားမှာတုန်း…ဟိုတစ်ခေါက် တုန်းကလို သမီးဟာပြဲသွားလားမသိဘူးဆိုရင်ငါRoll onဘူး နဲ့ထပ်ထိုးပေးလိုက်အုန်းမှာ..ကောင်မလေးနော်..အမေထက်သမီးတစ်လကြီးချင် နေ..ဟုတ်လား.. ဟိ..အမေနော်..အမေ့Roll onဗူးဆိုရင်တော့ ကွိုင်လေးဘာလေးစွပ်ပြီးမှထိုး…ဟိဟိ.. ဒီကောင်မလေး..အမေကို….ကဲ..ငါ..သွား မယ်..ကျောင်းမသွားဘူးဆိုရင်လဲမောင်တုတ်ကိုတစ်ခုခုစီစဉ်ပြီးကျွေး လိုက်…ငါအလုပ်နောက်ကျနေတော့မယ်.. Yes… သွက်လက်တက်ကြွစွာပဲထက် ထက် ကသူ့အမေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ အားဝါးပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ သူမအမေက.. ဟွန်း.ရွံစရာ..ရေခဲချောင်းစားထားတာကြီးနဲ့ လို့နောက်သွား ပါသေးတယ်။ဒီစကားတွေကြားပြီးမောင်တုတ်တစ် ယောက်သွေးဆူမိတာအမှန်။ဖြစ်နိုင်ရင် ရုံးတက်ဖို့သွားတဲ့ယောက္ခမကြီးကိုလိင်စိတ်နဲ့ပထမဆုံးကြည့် လိုက်မိတာ သူမဝတ်ထားတဲ့ အဖြူရောင်ရှပ်အကျီ်နဲ့ဒူးဖုံးစကဒ်အနက်ရောင်လေးနဲ့ပင်တီအရာကြီးကထင်းလို့။ချက်ချင်းပဲ မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီး အတွေးထဲကဖျောက်နေတုန်းထက်ထက်တစ်ယောက်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးထမိန် ရေလျားလေးကိုချွတ်ပြီးအလိုက်တသိဘာမှပြောစရာမလိုပဲကုတင် စောင်းမှာလေးဘက်လေးပြန်ထောက်ပြီး…
လာကွာ..ကို…ထက်မပြီးသေးဘူး..လာလုပ်….ဆိုပြီးချွဲပြစ်ပြစ်အမူအယာလေးနဲ့ပြောတော့ (ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..မောင်တုတ်ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ ဟင်…………….(စတာပါဗျာ)) မောင်တုတ်နဲ့ထက်ထက်တို့တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်။ကုတင်စောင်းမှာလေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ထက်ထက် ကိုမောင်တုတ် ဆောင့်ဆောင့်ပြီးလိုးတာ ဖင်ကိုသာမကိုင်ပေးထားဘူးဆိုရင်ထက်ထက်တစ်ယောက်အရှေ့ကို ဟပ်ထိုးလဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြမ်းတာလဲလို့ တစ်ချီပြီး သွားတဲ့အခါမှာထက်ထက်ကမေးတော့ ထက်အမေနဲ့ ထက်ကိုပြိုင်တူလိုးချင်းစိတ်ပြင်းထန်နေလို့ပါလို့ပြောလိုက်ရင် ဓါးနဲ့ထိုးမှာဆိုးလို့ ထက်ကအရမ်းလှ လို့ပါလို့ပြော လိုက်ပါတယ်။ထက်ထက်လဲပြုံးသွားပြီး.. နှုံးသွားတယ်..ကိုရယ်..ထက်ခဏအိပ်အုန်းမယ်..ကိုလဲ..တူတူလာအိပ်နော်.. အင်..ကို..အပေါ့သွား လိုက်အုန်းမယ်… ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပဲ ရှုးရှုးပေါက်ပြီး လိင်တံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ထွက်လာမိပါတယ်။တစ်ခါမှသတိမ ထားမိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ကျွန်တော်အပူတပြင်းရှာဖွေနေမိပါတယ်။ထက်ထက်တို့အိမ်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကာလ အတွင်းမှာပထမဆုံးဆိုတာတော့ဝန်ခံပါရစေ။
ကျွန်တော်ရှာနေမိ တာ ထက်ထက်တို့အိမ်နောက်ဖေးမှာလှမ်းထား တဲ့ ထက်ထက်အမေဝတ်တဲ့အတွင်းခံတွေကိုပါ။ဘာရယ်လို့တေ့ာမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်ချင်စိတ်တွေပြင်းထန် နေပါ တယ်။တွေ့ပါပြီ..။ကြိုးတန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ အနီရောင်ပင်တီတစ်ထည်ရယ်၊ ပန်းဆီရောင်တစ်ထည်ရယ်။ဘယ် သူ့ဟာ ဘာရောင်ဆိုတာကျနော်ခွဲခြား တက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူထက်ထက်ရဲ့ဆိုဒ်ကို ကျနော်သိနေပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော် မောင်တုတ်ရဲ့လက်တွေဟာ မစေခိုင်း ရပါပဲ အနီရောင်အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဇာနားကွပ်လေးတွေနဲ့ အနီရောင်ပင်တီလေးရဲ့ဘယ်နေရာဟာဘာကို ဖုံးအုပ်နေလိမ့်မ လဲလို့ရင်ဖိုစွာကြည့်ရင်းနဲ့ ကျနော့်ရဲ့လီးနဲ့ ပင်တီလေးရဲ့အဓိကနေရာတို့ထိတွေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ လိင်တံကြီးကပြန်မာလာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာထက်ထက်ကို လိုးပြီးထွက်ထားတဲ့လိင်ရည်တွေရယ်၊ထက်ထက်ဆီ ကထွက်ထားတဲ့အရည်တွေရယ်လီးမှာပေနေတုန်းပါ။ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ လီးကိုပင်တီနဲ့အုပ်ပြီဆုတ်ကိုင်လို့ကောင်းကောင်းဆုတ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာလာမှ သတိပြန်ဝင်ပြီး ရှူးပေါက်၊ရေဆေးပြီးတာနဲ့ ပင်တီလေးကိုသူ့နေရာသူပြန်လှမ်းခဲ့ပြီးထက်ထက်ဘေးမှာဝင်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ထက်ထက်နိုးလာတော့ ခုနက အမေဘာတွေပြောသွားလဲဆိုပြီးမသိချင် ယောင်ဆောင်ပြီးကြောက်နေသလိုစိုးရွံ့ နေသလိုလိုဟန်လုပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်(သူငယ်ချင်းတို့ရေ..မောင်တုတ်ကအဲ့လိုမျိုးလဲသောက်ခွက်ပြောင် တိုက် တက်ပါတယ်။)
ဘာမှမဖြစ်ဘူးကို…အမေနဲ့ထက်နဲ့ကအရမ်းပွင့်လင်းတာ…။အမေကဘာမှမပြောဘူး..မစိုးရိမ်နဲ့..ဟိုတစ် ခေါက်တုန်းက ကို လုပ်တုန်းကထက်ထက် အဖုတ် လေးပွန်းသွားလို့နာတာတောင်မှအမေ့ကိုပြောပြလိုက် တယ်။အမေနဲ့ကအဲ့ဒီလောက်ပွင့်လင်းတာ..ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းလဲဆိုရင်..အမ်စီကားတွေလောက် ကို အတူတူထိုင်ကြည့်ကြတယ်။။အရမ်းကြမ်းတဲ့ကားတွေကိုသာ တစ်ယောက်စီခွဲကြည့်ကြတာ။ဒါတွေကိုတစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိနေပေမဲ့မပြော ဘူး….မေမေဆီမှာ ဖေဖေထားခဲ့တဲ့အခွေတွေအများကြီး။ဖေဖေက သင်္ဘောသားဆိုတော့ အခွေတွေဝယ်လာတာ..ထက်လဲကြည့်ချင်ယူကြည့်လိုက်တာ ပဲ..မေမေကသိတယ် ။ဘာမှမပြောဘူး…။အဲ့ဒါ ၁၀တန်းအောင်ကတည်းကလေ။ အော်..ဒါဆိုထက်မေမေကထက်ကိုအရမ်းအလိုလိုက်တယ်ပေါ့။
အဲ့လို လဲမဟုတ်ဘူး..အသက်အရွယ်နဲ့ခေတ်အခြေအနေကိုနားလည်တယ်.ထက်ဘက်ကလဲကျောင်းစာကို ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာ..လုပ်ချင်တာ လုပ်စာမေးပွဲမကျရင်ပြီးရော..မူးယစ်ဆေးမသုံးရင်ပြီးရော ကျန်တာကတော့ခွင့်လွှတ်တယ်…တစ်ခါတစ်လေဆိုရယ်ရတယ်သိလား….မေမေကိုဖုန်းနဲ့ကြူ နေတဲ့ဘဲကြီး တွေကို ထက်က ဟောက်လွှတ်တာ….ဟိ.. အမေက နောက်ထပ်အိမ်ထောင်မပြုဘူးပေါ့..ဒါဆို.. အမလေ..ကိုရေ…ပြောမနေနဲ့ အမေကို လိုက်နေတဲ့ ဘဲကြီးတွေ၊ဘဲလေးတွေတစ်ပုံကြိး၊ထက်တို့အသက်အရွယ် ကောင်လေးတွေတောင်ပါသေး…။မေမေက ထက်အိမ်ထောင်ကျမှ အိမ်ထောင်ပြု မယ်ပြောတာပဲ..အင်းလေ…. ထက်နားလည်ပေးရမှာပေါ့။ သူလဲသွေးသားနဲ့ပဲလေ..အသက်(၃၀)ကတည်းကမုဆိုးမဖြစ်တာ….အခုဆိုသူ(၄၁) နှစ်ရှိနေ ပြီ..မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ ထက်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ထက်နဲ့ကို နဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်ကြရင်မေမေ့ကိုအား နာမိတယ်..သိလား..ကို…
ဘာလို့လဲ..ထက်ရဲ့ အော်..သူလဲသွေးသားနဲ့ပဲလေ…ထက်ကို ငဲ့ပြီးတော့ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲနေတာ ဒါကိုထက်က သူ့ကိုမငဲ့ပဲ ..ကိုနဲ့.. ကိုနဲ့..ဘာဖြစ်လဲ ထက်ရဲ့(မောင်တုတ်တမင်မေးလိုက်တာပါ။) ကိုနဲ့ လုပ်ကြတာလေ….လိုးတာလေ..သိပြီလားးလိုးတာ… ဒါဆိုလဲ ထက်ရယ်…မေမေ့ကို ဝေပေးလိုက် ပေါ့(တမင်သွေးတိုးစမ်းပြီးမေးကြည့်တာ) ဘာကိုဝေပေးရမှာလဲ..ဟင့်အင်း..ကိုရယ်..အဲ့လိုကြီးတော့မကောင်းပါဘူး…မေမေကလိုချင်လွန်းလို့တောင်းဆို လာရင်တော့လဲ ပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ မေမေနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်တော့ ကိုနဲ့ထက်လမ်းခွဲမှာ… ဟင်..ဘာဖြစ်လို့လဲ..ကို..ကစကားအဖြစ်ပြောတာပါ။ အင်း..သိပါ တယ်။။ထက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ…မေမေတောင်းဆိုလာသည့်တိုင်အောင်ထက်မငြင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလူကိုလေ ထက်ဘယ်လောက်ထိချစ်နေပါစေ လုံးဝလုံးဝလက်မထပ်ဘူးသိလား.. ကျနော်မောင်တုတ်သက်ပြင်းလေးချလိုက်မိပါတယ်။
ဘာတွေသက်ပြင်းချနေတာလဲ..သိတယ်နော်..ဟွန်း..ဆရာမကပါကင်ဖွင့်လိုက်လို့ကျလာတာဆိုတော့ အသက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ မစ်ဖ်လိုဖ်ခရစ်ဆစ် ဖြစ်နေ တာလား.ဟွန်း..သူများအမေကို….ကိုနော်.. အာ..မဟုတ်ပါဘူးကွာ…နောက်တစ်ချီထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုမလို့ပါ….ဟိဟိ ဟွန်း…ဒါကြီးက ကဲကိုကဲ တယ်….လို့ဆိုပြီးထက်ထက်တစ်ယောက် စောင်အောက်ထဲကိုခေါင်းတိုးဝင်သွားပါ တယ်။သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်နော့်လိင်တံကြီးဟာ ပူနွေးတဲ့အာငွေ့ရဲ့ထိ တွေ့မှုကိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်တနေ့…ထက်ထက်မှာထားတဲ့ ဒီဗီဒီခွေတွေကို အိမ်ကိုသွားပို့ဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်က နောက်ဆုံးထွက်ထား တဲ့စပါ တာဂတ်အခွေတွေကြည့်ချင်တယ်လို့ဆိုလာတာနဲ့ချစ်သူရဲ့စိတ်အလိုတော်ကျအတိုင်း မောင်တုတ်တစ် ယောက် ခိုးကူးရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဝယ်ပြီးသွားပေးပါ တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ ထက်ထက်က သူမအဖွားအိမ်ကိုသွား နေတယ်ခင်ဗျ။ယောက္ခမကြီးတစ်ယောက်ထဲအိမ်မှာ။သူလဲရုံးကပြန်လာခါစနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။ရုံး ယူနီဖောင်းမချွတ် ရသေးပဲအိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတယ်ခင်ဗျ။
ကျနော်ဝင်လာတာလဲမြင်ရော ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပြီး ဟဲ့ကောင်လေး…ထက် ထက်မရှိဘူးလေ..ဘာလာလုပ်တာလဲ ….လို့မေးပါတယ်။ကျနော်လဲထက်ထက်ကအခွေ တွေလာပေးခိုင်းလို့လာပေးတာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ယောက္ခမ ကြီးက အော်..အေး..ဟုတ်တယ်..အန်တီသူ့ကိုဝယ်ခိုင်းထားတာ…ကြည့်စမ်း..သူများကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်ပြန်ပြီ..ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူး..မိထက်ကတော့..ဒီလို ပဲ… ရပါတယ်အန်တီရယ်..ကျနော်ကသူစိမ်းမှမဟုတ်တာပဲ..ရော့ဒီမှာအန်တီမှာထားတယ်ဆိုတဲ့အခွေတွေ.. ကျနော်ယောက္ခမကြီးကိုအခွေတွေလှမ်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ပါးစပ်ကယောင်ပြီးအန်တီမှာထားတဲ့အခွေတွေလို့ ထွက်သွားတာကိုပြန်ဘရိတ်အုပ်ချိန်မရတော့ပါဘူး.။သူမှာထားတာက စပါတာကပ် အခွေတွေလေဗျာ… ကျနော်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခွေတွေထည့်ထားတဲ့အမည်းရောင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အထုတ်ကိုလှမ်းယူပြီးအခွေ တွေကိုထုတ်ပြီး ယောက္ခမကြီးကကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အကျယ် ချဲ့ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြုံးဟာ အကြံအစည် တစ်ခုခုရသွားတဲ့အပြုံးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ. သား…တခုခုသောက်ပါလား……အပူလား…အအေးလား…. အင်း။။ရပါတယ် အန်တီ။။အဆင်ပြေတာပေါ့။။။
ဒါဆိုခနစောင့်…အန်တီသွားလုပ်လိုက်မယ်… ပြောပြေဆိုဆိုနဲ့ကျနော့်ရှေ့ကနေဖြတ်သွားပြီးနောက်ဖေးခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ယောက္ခမကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအလှ ဟာ အနက်ရောင်စကဒ်အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီရာကြီးနဲ့လုံးဝန်းစွင့်ကားနေပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တစ်လုံးချင်းစီတုန်ခါသွားတဲ့တင်ပါးကြီး တွေဟာတကယ့်ဂန္တဝင်(သရုပ်ဆောင်မဟုတ်)အလှဆိုရင်ငြင်းမဲ့လူမရှိ ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဖေးဝင်သွားတာ (၃)မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်ပါ တယ်။ကော်ဖီခွက်နှစ်ခွက်ကို ကိုင်ရင်းပြန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ ရော့သား..ကော်ဖီသောက်အုန်း… ဟုတ်… သူမလဲ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာထိုင်ရင်း ကော်ဖီသောက်နေပါတယ်။သိပ်မကြာပါဘူး။ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့အခွေတွေ ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုယူပြီးတော့ အခွေတွေထဲကတစ်ခွေကိုရွေးပြီး ဆိုဖာ ပေါ်ကနေအောက်ကိုဒူးထောက်ထိုင် ချလိုက်ပြီးအရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီစက်ထဲကိုဖင်ကြီးကုန်ပြီးအခွေထည့်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ ဗျာ။
ဖင်လုံးကြီးတွေလှလွန်းတဲ့အန်တီကြီးတစ်ယောက်ဒူးဖုံးစကဒ်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖင်ကုန်ပြနေတာများဗျာ။ လုံးဝန်းပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီအရာကြီးကိုထင်း နေတာပဲ။ကိုင်ပြီးဆောင့်လိုက်ရရင်အနှစ်ပဲလို့တွေးနေချိန်မှာပဲ …ဟိတ်ကောင်လေး..ကော်ဖီတွေမှောက်ကုန်မယ်နော်..ဘာတွေကြည့်နေတာလဲ …..ဆိုတဲ့ သူမရဲ့အသံထွက် လာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တီဗီမှမဖွင့်ရသေးတာ။တီဗီမှာကျနော်သူ့ကိုကြည့်နေတာကိုသူမပြန်မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့စပါတာ ကပ် တယ်ဆိုပါတော့။ရောမလူထွားကြီးတွေချလိုက်ကြ၊နှက်လိုက်ကြ၊အီတာလျှံသူလေးတွေကလဲ ရေဆေးငါးတွေလိုဖြူဖြူဝင်းဝင်းကြီးတွေနဲ့နို့တွေဖော်ပြီး သရုပ်ဆောင်..ဒီလိုနဲ့ကောင်းခန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ယောက္ခမကြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူး..ကျွန်တော်ကတော့ညီတော်မောင်ခေါင်း ထောင်လာပြီး သကာလ နှာမှုတ်အသက်ရှုသံတွေပြင်းလာပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သူမကိုကြည့်လိုက်တော့လဲမျက်လုံး တွေကမျက်မှန်အမဲကျွဲကိုင်း အောက်မှာအရည်တွေလဲ့ပြိးကြည့်နေတာ..ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြည့်တွေဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာ မင်းသားကိုမင်းသမီးကတီဗီထဲမှာ ပလွေကိုင်ပေးနေပါပြီ။
နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်မိချိန်မှာတော့သူမကစပြိးပြုံးပြလို့ကျနော်လဲအူကြောင်ကြောင်လီးတောင်လျှက်ပဲပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာ တော့ယောက္ခမကြီးကမပြောမဆိုနဲ့ အခွေထည့်တုန်းကအနေအထားအ တိုင်းဒူးတုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအခွေရွေးနေသယောင်နဲ့ဖင်ကြီးထပ်ကုန်းပြပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေမုန်ယိုနေပါ ပြီ။အကယ်လို့အတွင်းဆွဲပြီးလိုးလိုက်ရင်လဲ ပြသနာမရှိနိုင်ဘူးလို့တွေးမိပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော့် ဟာသူမ သမီးရဲ့ချစ်သူလေ…။ဒါပေမဲ့စိတ်ကမရဲပေမဲ့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်က်မထိတထိသူမဖင်သားကြိးတွေ ကိုခြေမနဲ့သွားထိကြည့်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ အထိအတွေ့ဗျာ။ဒါတောင်ခြေမနဲ့တို့သလိုပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလို မျိုး(၃)ခါလောက်မတော်တဆလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ.. ဟဲ့ကောင် လေး..လူကြီးကိုခြေထောက်ကြိးနဲ့ငရဲကြီးမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုပြိး ပြုံးရင်းပြန်ပြောတဲ့အသံကိုကြား တော့… ဟင့်အင်း..မကြောက်ပါဘူး.. မကြောက် ဘူးဆိုလာခဲ့လေ။။။။
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ကိုမောင်တုတ်ဟာဒီလောက်တော့မတုံးမအသေးပါဘူး။စွေ့ခနဲဆိုယောက္ခမကြီးရဲ့ဘေးကိုငုတ်တုတ်ကြီးရောက်သွားပြီးသူမခါးကနေပြီဖက် လိုက်ပါတယ်။ပြီတဲ့နောက်မှာတော့တင်ပလင်ခွေထိုင်ပြိးသူမကိုယ်လုံးကိုရင်ဘတ်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ယောက္ခမကြိးကမျက်လုံးမှိတ်ထားပေမဲ့ပြုံး ယောင်သမ်းနေတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုငုံစုပ်လိုက်ချိန်မှာနှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုးထားလို့မွေးတေးတေးဖြစ်နေပေမဲ့သူမရဲ့အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ပြန်လည်တုန့်ပြန်မှု ကြောင့် ကျွန်တော်လက်တွေဟာမရိုးမရွဖြစ်လာပြီးသူမကိုသိုင်းဖက်ထားရာကနေသူမရဲ့စကဒ်ပေါ်က ဖင်သားတွေကိုကိုင်တွယ်နေရင်းအတွင်းခံအရာကြီး ကိုလက်နဲ့ဆတ်ခနဲဆွဲလိုက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လုပ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဖတ်ခနဲဖတ်ခနဲအသံတွေတောင်မြည်လာပါတယ်။ယောက္ခမကြီးပွဲစကြမ်းပါပြီ။သူမ ရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လိင်တံကိုပုဆိုးအပေါ်ကနေလာကိုင်တဲ့အတွက်လိင်တံကြီးဟာအင်မတန်မာကျောလှနေပြီပေါ့။ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းနမ်းရင်းဘယ်လိုဘယ်လိုယောက္ခမကြိးရဲ့အကျီ င်္ကြယ်သီးတွေဖြုတ်မိ တယ်မသိပါဘူး။ကျနော်သတိထားမိချိန်မှာတော့ကျွန်တော် လဲအပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေပြိး..ယောက္ခမကြီးရဲ့ရုံး ဝတ်စုံ(ရှပ်အဖြူနဲ့စကဒ်အမဲ)အကျီင်္ င်္ကျယ်သီးတွေဟာတစ်လုံးမကျန်ပွင့်ထွက်နေပါပြီ။
အရမ်းမကြီးပေမဲ့အောက်ကိုအနည်းငယ်တွဲနေသယောင်ရှိတဲ့သူမနို့အုံဖြူဖြူကြီးတွေကိုစည်းနှောင်ထားတာက ဘရာဇီယာခရမ်းရောင်လေးပါ။မောင်တုတ် လက်တွေကလဲ ဘရာဇီယာပေါ်ကနေပြိးသူမနို့တွေကိုအုပ်မိုးပြီးကိုင် ထားရာကနေပြီး ယောက္ခမကြီးက.. အခန်းထဲသွားကြမယ်လေ… မောင်တုတ်တို့လဲ တီဗီကိုပိတ်ပြီးယောက္ခမကြိးအခန်းထဲကိုယောက္ခမကြိးတင်ပါးတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကဆုတ် ကိုင်ရင်းဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက် တယ်ဆိုရင်ပဲမောင်တုတ်ကပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး သူမကတော့ သူမအကျိ်ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စကဒ်ကိုဘေးဇစ်ကိုဖြုတ်လိုက် ချိန်မှာ တော့မောင်တုတ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူမတင်ပါးကြီးတွေကအရာထင်းထင်းကြီးတွေဟာအနီရောင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် လို့သိလိုက်ရပါတယ်။စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကိုဇာနားကွပ်တွေပါတဲ့အတွင်းခံအနီရောင်ကိုချွတ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှတော့..မောင်တုတ်က.. မ..မချွတ်နဲ့အုန်း…ခနလေး..ဒီအတိုင်း.. ဟယ်..မင်း..ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်… မ..လို့ခေါ်တာလေ……ဘာဖြစ်လို့လဲ.. တော်လိုက်တာ…မောင်ရယ်.. ယောက်ခမနဲ့ကျွန်တော်..မနဲ့မောင်ဖြစ်သွား ကြတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်တုတ်ကအတွင်းခံအမဲရောင်လေးနဲ့သူမကတော့ဘရာဇီယာခရမ်းရောင်လေးရယ်အတွင်းခံအနီရောင်လေးရယ်နဲ့ ကျနော်တို့နှစ် ယောက်ခုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်လျှက်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမောင်တုတ်ကအပေါ်ကသူမက အောက်ကပေါ့။
မောင်တုတ် တစ်ယောက်သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုလိုက်နမ်းနေရင်းနှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်လိုက် နားရွက်လေးတွေကိုကိုက်လိုက်လုပ်လိုက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။မောင်တုတ် လက်တွေကတော့သူမရဲ့ဘရာဇီယာ ကိုအတွင်းထဲလက်နှိုက်ပြီးတော့သူမနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပွတ်ချေပေးနေတာပါ။.နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာမာကျော လာတယ်ဆိုတာကိုမောင်တုတ်ရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှတော့မျက်နှာကိုနမ်းတာရပ်ပြိး ဘရာဇီယာကိုမချွတ်ပဲနို့တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြိး သူမနို့သီးခေါင်းအညိုရောင်မာကျောကျောလေးတွေကိုလျာနဲ့ ယက်လိုက်၊စို့လိုက်လုပ်ပေးချိန်မှာတော့ အားး…ကောင်းလိုက်တာ..အင်းး…အင်းးး..ဟ င်းး..အီးး..ရှီး..အားးးး သူမထံကညည်းသံလေးတွေခပ်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာပါတယ်။မောင်တုတ်လဲလက်တွေကိုအနားမနေပဲသူမရဲ့ စောက်ဖုတ်နေရာကို မှန်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘိအနီရောင်ပေါ်ကနေပြီးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှတော့အတွင်းခံဂွကြားနေရာမှာစိုစွတ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်တုတ်တစ်ယောက်နို့တွေ စို့တာရပ်ပြီးအဆီအနည်းငယ်စုနေလို့ဆူနေစပြု နေတဲ့ဝမ်းဗိုက်သာဖြူဖြူတွေကိုလျှာလေးနဲ့မထိတထိကလိရင်းအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြိးသူမ ရဲ့ပင်တီနေရာရောက်တော့ပင်တီကိုမချွတ်ပေးပဲစောက်ဖုတ်ရှိနေတဲ့နေရာကိုဆွဲလှန်လိုက်ပြိးတော့သူမစောက်ဖုတ်ကိုစတင်လေ့လာပါတော့တယ်။အမွေး ကြမ်းကြမ်းတွေပေါက်နေတဲ့ဆီးခုံမွှေးတွေအောက်ကနီအာနေတဲစောက်ဖုတ်မှာချွဲနေတဲ့စောက်ရည်တွေနဲ့အပြည့်ပေါ့။ဒီကြားထဲမှာစောက်ဖုတ်ကိုဖြဲလိုက် ရင်ပေါ်လာတဲ့အစိနီနီလေးတွေကိုလျှာနဲ့တို့လိုက်ချိန်မှတော့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ငံကျိကျိအရသာကိုခံစားရပြီးသူမကတော့အိပ်ယာခင်းစကို လက်နှစ် ဖက်ကားပြိးဖမ်းဆုတ်လိုက်ပါတယ်။
အား..အားးးး..ကောင်း။….ကောင်းလိုက်တာ..အီးးးးးရှီးးးအင်းးးးဟားးးဟားးး မောင်တုတ်စပြီးတော့ဂျာနေပါပြိ။သူမကတော့ကုတင်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဘက် ကိုကားထား၊ကားထားတဲ့လက်နှစ်ဘက်ကလဲအိပ်ယာခင်းစတွေကိုဆုတ်ကိုင်ရင်းနဲ့ကော့လန်နေပါပြီ။(၁၀)မိနစ်လောက်အဖုတ်ကိုယက်လိုက်၊အစိ ကိုစုပ် လိုက်လုပ်ပေးချိန်မှာတော့သူမအရှိန်တွေမြင့်လာပြီးတော့မောင်တုတ်ဆံပင်တွေကိုဆုတ်ကိုင်လာပါတယ်။အားပါလာတဲ့အချိန်သတိထားမိတာကတော့ စောက်ဖုတ်အရည်တွေအတော်လေးထွက်ပြီးသူမပြီးသွားပါတော့တယ်….။ အား..ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်..ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ်…မ..တခါပြီးတယ် သိလား.. အင်း..နှစ်ယောက်ပြိုင်တူစုပ်ရအောင်နော်.. မောင်တုတ်တစ်ယောက်နေရာပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူမလဲကုတင်ပေါ်ကထပြိးအတွင်းခံကိုချွတ်ပြီး မောင်တုတ် ဘက်ကိုကျောပေးပြီးတက်ခွပါတယ်။မောင်တုတ်အတွင်းခံကိုသူမကပါးစပ်နဲ့ညှပ်ပြီးချွတ်ပေးချိန်မှာတော့ဒုံးပျံ့တစင်းအလားထောင်မတ်နေ တဲ့လီးကြီးကိုစတင်ပြီးစုပ်ပါတော့တယ်။ယောက္ခမကြိးရဲ့လိးစုပ်ပညာကတော့အံမခန်း ပါ။ထက်ထက်တစ်ယောက်လဲအမေတူလေးမို့ထင်ပါတယ်အစုပ် အမှုတ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ယောက္ခမကြီးဆီ ကထူးခြားတာကတော့ 69ပုံစံနဲ့စုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖင်ကြိးကိုယမ်းပြီးတော့စောက်ဖုတ်နဲ့ကျနော့်မျက်နှာကို ပွတ် တာပါပဲ။(၁၅)မိနစ်လောက်စုပ်ပြီးမှုတ်ပြိးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမကပဲ ဦးဆောင်ပြီးပုံစံပြောင်းပါတယ်။ပြောင်း တဲ့ပုံစံကတော့သူမကအပေါ်ကပါ။
ပက်လက်လှန်ပြီးလီးတောင်ထားတဲ့မောင်တုတ်လီးရှေ့တည့်တည့်ကိုတစ် ချက်ထဲကိုထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အရှေ့အနောက်ဖိပွတ်လိုက်၊ဆောင့်လိုက်၊စကော ဝိုင်းမွှေလိုက်နဲ့ယောက္ခမက စိတ်ကြိုက်လိုးနေပါတယ်။ကောင်းလွန်းလို့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ပြီးသွားမှာဆိုးလို့မနည်းကိုထိမ်းနေရပါတယ်။ သူမ ဆောင့် ချက်တွေကြောင့်မောင်တုတ်တစ်ယောက်ဖီလင်တွေငယ်ထိပ်ရောက်ပြီးမျက်လုံးတွေတောင်မှေးစင်း နေရပါတယ်။သူမနောက်တစ်ခေါက်ပြိးသွား ဟန်တူပါတယ်။အင်မတန်ကြမ်းတဲ့ဆောင့်ချက်တွေကနေအရှိန်သေ သွားပြီးမောင်တုတ်အပေါ်ကိုမှောက်ကျလာပါတယ်။မောင်တုတ်လဲ နို့တွေကိုလက်နဲ့ ညှစ်ပေးပြီးသူမကိုဖမ်းထိမ်း ထားပြီးဒူးကိုထောင်ကာ လေးငါးဆယ်ချက်လောက်ဆောင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာယောက္ခမကြီးအသံတောင်မထွက် နိုင်တော့ပဲ အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတွေသာကြားနေရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇကတော့မသေးတဲ့ယောက္ခမကြိးက မောင်..စိတ်ကြိုက်လုပ်နော်လို့ပြောရင်း…မောင်တုတ် ပေါ်ကတက်ခွနေရာကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်တုတ် ပေါင်တွေ၊ဥတွေမှာယောက္ခမကြိးဆီကထွက်တဲ့အရည်တွေရွှဲလို့နေပါတယ်။
သူမကဘယ်လိုနေ ပေးရမလဲဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တော့မောင်တုတ်ကိုယ်တိုင်ပဲလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်အိုးကောင်းတဲ့စော် ကြီးကိုကုန်းခိုင်းပြီးမ လုပ်ရင်မောင်တုတ်တစ်ယောက် ခွေးဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။သူမကိုကုတင်စောင်းမှာပဲလက်ထောက် ပြီးခါးကိုခွက်ကာကုန်းခိုင်းပါတယ်။အလိုက်သိလွန်းတဲ့ ယောက္ခမကြီးကခေါင်းအုံးကိုရင်ဘတ်ထဲမှာပိုက်ပြီးကုန်း နေတာမို့ခါးကခွက်နေပြီးဖင်ပူးတောင်းထောင်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။မောင်တုတ်တစ်ယောက် အားမနာနိုင်ပဲ ယောက္ခမကြီးရဲ့စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးကြိးတွေကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့စုံကိုင်ညှစ်ပေးပြီးအားပါးတရဆောင့်ပေးနေပါ တယ်။(၁၀)မိနစ်လောက်ကြာ တော့မောင်တုတ်ပြီးချင်လာတာနဲ့ ယောက္ခမကြိးကိုပက်လက်ပြန်လှန်လိုက်ပြီး လှေထိုးကြီးပုံစံနဲ့တစ်မျိုးတစ်တီတူးခြေထောင်ပုံစံနဲ့တဖုံဆော်ပေးနေရင်း မောင်တုတ်တစ်ယောက်ပြီးချင်လာပါ တယ်။ဒါကြောင့် မ..ပြိး..တော့တယ်..အားး..ရှီး..ဘယ်မှာပြီးရမလဲ..မ… အပြင်ထုတ်လိုက်..မောင်…ကြိုက်သလို ပြီး..အပြင်မှာ… အင်း… မောင်တုတ်တစ်ယောက်လိုးနေရင်းနဲ့ယောက္ခမကြီးချွတ်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုပြန်တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွဲကိုင်း မျက်မှန်အမဲရောင် နဲ့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတဲ့မောင်တုတ်ယောက္ခမကြိးကိုနုိ့တွေကိုဖြစ်ညှစ်ရင်းနို့သီးခေါင်းတွေကိုဆွဲရင်းလိုးကာလိင်တံ တစ်လျှောက်မှာကျင်ခနဲဖြစ်သွားလို့ လီးကိုကပြာကယာဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးယောက်ခမရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုခွလိုက်ကာ သူမမျက်နှာပေါ်ကိုလိင်ရည်ဖြူဖြူတွေ ပန်းချလိုက်ပါတယ်။လိင်ရည်တွေ ဟာသူမ မျက်မှန်ထိစင်ကုန်တာကြောင့်အောကားထဲကအတိုင်းကိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ကသူမကို မောင်တုတ်(၃)ချီ ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထက်ထက်လစ်ရင်လစ်သလိုခိုးစား နေခဲ့တာ ထက်ထက်နဲ့ပြသနာမတက်ခင်အထိပေါ့။ဒါပေမဲ့ယောက္ခမကြိးကလိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာနေပေးအုန်း မယ်ဆိုတာ ယနေ့အထိပြောနေတုန်းပါပဲ။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မတျောလိုကျရတဲ့ယောက်ခမ